Hetsik’ireo Makedoniàna Mpampanofa Vatana Mba Hitakiana Ny Tsy Hiheverana izany ho Heloka Bevava, ho Fanefitry ny Herisetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 8:10 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Español, Italiano, English
Diaben'ny elo mena tao Skopje, 17 desambra 2018. SAry an'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA. Anisany tao anatin'ireo tahiritsary 186 nampiasàna lisansa Creative Commons.
Ny 17 desambra, ireo mpampanofa vatana, mpanao ‘strip-tease’, ireo mpiasa mpiresaka veta amin'ny telefona sy ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona ao Makedonia dia nikarakara ny andiany faha-iraika ambinifolon'ny “Diabe ho an'ny elo mena” tao Skopje, mba hanamarihana ny Andro Iraisam-pirenena anoherana ny herisetra atao amin'ireo mpampanofa vatana.
Nomarihin'ireo mpampanofa vatana, ireo mpiaro an-dry zareo, ireo namany, ireo fianakaviany ary ireo mpiaradia aminy tamin'ny 17 Desambra ny Andro Iraisam-pirenena anoherana ny Herisetra Atao Amin'ireo Mpampanofa Vatana. Sarihan'ity andro ity ny saina ho any amin'ireo heloka bevava miaro fankahalana zakain'ireo mpampanofa vatana erantany, ary koa ny filàna hanafoanana ny fitsaràna an-tendrony ara-tsosialy sy ny fanavakavahana izay mandray anjara amin'ny fisian'ny herisetra atao amin'ireo mpampanofa vatana sy ny fanaovana tsinontsinona an'ireo vondrom-piarahamonina misy azy ireo.
Ilay diabe makedoniana dia nokarakarain'ny STAR-STAR – ilay fikambanana voalohany ivondronan'ireo mpampanofa vatana any Balkans, ho fandraisany anjara amin'ny hetsika erantany fanehoana firaisankina miaraka amin'ireo mpampanofa vatana izay miady manohitra ny herisetra sy ny fanavakavahana. Nanambara ireo mpandray anjara fa:
Te-handefa hafatra iray izahay: “TSY FIHEVERANA HO HELOKA BEVAVA, IZAO ANKEHITRINY IZAO!” ary mamporisika ireo andrim-panjakana sy ny daholobe mba hanokatra adihevitra mikasika ny fandrindràna ny asa fampanofàna vatana. Mihevitra ireo mpivarotena fa ny tsy fiheverana azy ho heloka bevava no politika tsara indrindra hanatsaràna ny fahasalamana, ny fiadanana, ary ny zo maha-olombelona an'ireo mpampanofa vatana. Mifototra amin'ny filàn'ireo mpampanofa vatana ireny ezaka ireny, mba hiantohana ny fiarovana ny zo maha-olona azy ireo, mba hananganana fepetram-piainana sy asa azo antoka ary mba hiarovana ny herisetra sy ny fanararaotana.
Tao afovoan'ny renivohitr'i Makedonia no nisy ilay diabe. Nitondra saron-tava sy akanjo mampita hafatra ny sasany tamin'ireo mpampanofa vatana nandray anjara, mihiakiaka teny faneva toy ny hoe “Asa ny fampanofàna vatana”. Nanjary tenifototra iraisam-pirenena io fehezanteny io (#SexWorkIsWork) natosiky ny Sex Workers Outreach Project USA.
Anisan'ireo olona tena mahay mamorona, matanjaka ary tsara tarehy indrindra ireo mpampanofa vatana fantatro.
Amin'izao andro iraisam-pirenena hanafoanana ny herisetra atao amin'ny mpampanofa vatana izao, mampalahelo fa ny faniriana voajanahariko dia ny mba hangataka anareo hihevitra an'ireo mpampanofa vatana ho tahaka ny olombelona.
Mbola manana dia lavitra, tena lavitr'ezaka ho aleha isika. #IDEVASW #SexWorkIsWork
Ny mpitondra tenin'ilay Diaben'ny Elo Mena tao Skopje 2018, izay nitondra saron-tava ihany koa mba tsy hamantarana azy, dia nanazava fa irian'izy ireo ny hiheverana amin'ny maha-olona ny filàn'ity vondrona natao ankilabao ity.
Fantatrao ve impiry ireo mpampanofa vatana no mivarotra fitiavana, saingy daroka no setriny? Impiry ny volan'izy ireo no efa nangalarina? Impiry izy ireo no efa niantso ny mpitandro ny filaminana, saingy nalaina ny telefonin'izy ireo? Impiry izy ireo no nivarotra fitiavana, saingy nentina tamina fiarakodia niala ny tanàna ary navela niboridana sy tsy nanao kapa teny an-tendrombohitr'i Vodno? Impiry izy ireo no nila ny fiarovan'ny mpitandro filaminana sy fiarovana ara-tsosialy, saingy mila mandeha matory hikombom-bava ve izy ireo? Tsy resaka fanaovana azy ho ara-dalàna akory ny hafatray momba ny tsy hiheverana azy ho tsy heloka bevava! Ny tsy fiheverana azy ho heloka bevava dia midika ho fandrindrana ny zon'ireo mpampanofa vatana sy fandrindrana ny fitsaboana ara-tsosialy ary ny fahasalaman'izy ireny. Vokatra naterak'ity fiarahamonina ity ny asa fampanofàna vatana, ary ny rafitra dia tomponandraikitra amin'ny fanomezana fiahiana ara-pitsaboana [ho an'ireo rehetra mpikambana ao anatiny]…
An-tsitrapo no nifantenana ny fitafy, tao anatin'ny filozofian'ireo mpiaro ny zon'olombelona ho an'ireo mpampanofa vatana mikendry ny hiady amin'ny fanehoana mitanila an'ireny olona ireny any anaty media. Ity fanentanana famporisihana ity sy ireo teo aloha dia mifototra amin'ny fakàna indray ny fampiasana an'ireo tena endriny mba hisarihana ny saina.
Vakio ny blaoginay farany ary makà aingam-panahy ao: takian'ireo mpiaro ny zon'ireo mpampanofa vatana ao Makedonia ny hampiasàna ny tena endrik'izy ireo ho ampahany amin'ny fanentanana fandresena lahatra ataony. #SexWorkIsWork@star_sexwork @sexworkeurope @SWAN_Network @tampepeu https://t.co/s3MyatmHa3
Ireo andrim-panjakana, anisan'izany ny sampana mpanao lalàna, no lohalaharana kendren'ireny fanentanana fandresendahatra ireny, satria takian'ireo mpandray anjara ny hisian'ny fanovàna ny Lalàna mifehy ny Heloka bevava, izay tsy nasiam-panovàna nandritra ny telopolo taona hatramin'ny fianjeran'ny Kaominisma. Tsy nisy fanovàna ihany koa ny lalàna mikasika ny fitandroana ny filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemana, afatsy ny fampitomboana ny sazy ho an'ireo mpampanofa vatana.
Amporisihan'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo tomponandraikitra Makedoniana mba handinika lasitra hanesorana azy io tsy ho toy ny heloka bevava ao New Zealand, izay manaiky ny zo ho amin'ny asa sy ireo zon'olombelona ho an'ireo mpampanofa vatana.
“Antso ho an'ireo solontenanà andrim-panjakana: ‘Apetrakay aminareo ny fanantenanay.'” takelaka tazonin'ny mpandray anjara iray tamin'ilay “Diaben'ny Elo Mena” teo anoloan'ny Memorial House of Mother Theresa tao Skopje, Makedonia. Sary an'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA. Anisany tao anatin'ireo tahiritsary 186 nampiasàna lisansa Creative Commons.
Nandritra ny diabe, ny Tale Mpanatanteraky ny STAR-STAR, Borče Božinov,dia nitanisa fanadihadiana iray an'ny ONG HOPS – Tetikasa Misahana ny Fahasalamana ao Skopje, izay nahazoana valinteny avy tamin'ireo 310 mpampanofa vatana. Ny 211 dia nanambara fa niharanà karazana herisetra isankarazany, anisan'izany ny herisetra ara-nofo, ara-batana ary ara-tsaina. Ny 87% tamin'ireo mpampanofa vatana no niharan'ny herisetra avy amin'ireo mpanjifany, ¨ny 43% no niatrika sotasota sy fanambaniana avy tamin'ny mpitandro filaminana ary 28% no niaina fomba fitondra ratsy nataon'ny fianakaviany.
Manamafy ny STAR-STAR fa nitombo be ny isan'ireo olona voasarika ao anatin'ny fampanofàna vatana nandritra ireo taona 15 farany, raha toa ny “Fanjakana tsy nametraka tamin'ny toerany ny rafitra mazava ho fenitra mba handrindrana an'ireny asa ireny sy hanarahana maso ny fampidirana an'ireo mpampanofa vatana ireo ao anaty rafitra ara-dalana, ara-tsosialy, ary fahasalamana …”
Mety hampihena betsaka ireo herisetra ara-nofo sy ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ny fanaovana ny fampanofàna vatana tsy ho toy ny heloka bevava, araka ny fanadihadiana navoaka tamin'ny Review of Economic Studies tamin'ny taona 2017 sy navoakan'ny The Independent. Hita fa rehefa natao tsy ho toy ny heloka bevava ny fampanofàna vatana tao Rhode Island, nihena 30% ireo herisetra ara-nofo ary maherin'ny 40% ny fihenan'ny fiantraikan'ny aretina angaboribory (gonorrhea) vokatry ny firaisana teo amin'ireo vehivavy.
“Zonay ny hanana fiainana, fiarovana sy fahalalahana haneho hevitra, mitovy laharana amin'ireo olom-pirenena hafa rehetra”, takelaka tazonin'ny mpandray anjara iray tamin'ilay “Diaben'ny Elo Mena” tao Skopje, Makedonia. Sary an'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA. Anisany tao anatin'ireo tahiritsary 186 nampiasàna lisansa Creative Commons.
Tsy noraharahian'ireo tomponandraikitra Makedoniana ny fangatahan'ireo mpikatroka tamin'ny Diaben'ny Elo Mena hatramin'ny fiandohan'ny hetsika, efa ho 11 taona izao, ary mandraka androany, tsy misy rakitahiry ahitan'ny daholobe fa niova ny fihetsik'ireo andrim-panjakana.